Shiinaha Vibro Core warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. BAOTE
Mashiinka 'Vibro-core' wuxuu siiyaa soo saarayaasha nidaam wax soo saar badan, oo wax soo saar badan leh si ay u sameeyaan alaabada iyo qaababka sida dhuumaha la taaban karo iyo godadka godadka leh dhexroor
Ilaa 4,000 mm.
Soo saarida tuubooyin la xoojiyay iyo kuwa aan la xoojin
Tuubooyinka Rcc ee u hoggaansamaya dhammaan heerarka caalamiga ah:
elliptical, arch, wareega, sariirta pre, dhuumaha jaakada iyo biibiile PVC-ilaalin, qafisyada sanduuqa iyo godadalaabta. Giraanta dhamaadka birta, carrabka iyo jeexdin, goomaal muuqaal ah, oo ku eg O-Ring
safafka (PVC, GFR, HDPE,…)
tuubooyin laba jibbaaran / afar gees leh (Culverts Sanduuqa) ilaa 3.000 x 3.000 mm (cabirka gudaha)
gaar ah dhuumaha iskutallaabta, sida elliptical or arch shaped ama tuubooyin qalalan kanaallada cimiladu waxay gaarayaan ilaa 4,000 mm
Waxyaabaha waxaa lagu quudiyaa hawo wareeg ah oo loogu talagalay in lagu yareeyo dhejinta. Hangiraha wareega-qaabeeya wuxuu awood u siinayaa ikhtiyaarro badan oo dufan ah iyadoon loo eegin booska gudbiyaha. Hoobiyaha waxaa lagu qalabeeyaa kacsan hawo-wade si loo baabi'iyo buundada loona hagaajiyo socodka maaddada. Albaab nadiif ah ayaa ka mid ah xagga dambe ee biraha.
Gawaarida la taaban karo waxay u socdaalaan madaxa qeybinta sariirta la gashado oo la rogrogo oo loogu talagalay in si hufan loogu qaado alaab badan oo lumis yar.
Qalabka birta ee birta ah ee birta ah, oo u wareegaya dhinac kasta, wuxuu hubiyaa qulqulka bilaashka ah ee qalabka si toos ah foomka loo dhigay. Wax daadinta ayaa yaraatay, sida nadiifinta iyo waqtiga dayactirka. Rullaluistarka raadraaca ee dhamaadka buurku wuxuu raacayaa qaab kasta ama qaab kasta oo shey ah oo loogu talagalay meelaynta saxda ah ee shubka.
Iskuxidhka muraayadaha madax-bannaan ee kumbuyuutarrada ayaa si farsamaysan u riixaya giraanta madaxa sare ee shubka si loo helo isku-darka ugu sarreeya ee spigot, iyada oo laga takhalusi doono baahida loo qabo shir-madaxeed gaar ah oo cabbir kasta ah. Kulammada waxaa lagu dhejiyaa foomka loogu talagalay xargaha muhiimka ah, ama xuddunta u ah qaabka xargaha.
Farsamooyinka Xarumaha iyo Gooni Isutaagga
Meelaha wax lagu qaado ee Muhiimka ah
Haydarooliga wiishka wiishka sare ee wiishka saldhig walba wuxuu caawiyaa wiishka buundada markay ka saareyso xudunta iyo dhuumaha foomka iyagoo gacan ka geysanaya sidii looga gudbi lahaa isku xirnaanta isku xirnaanta alaabta iyo foomka. Tani waxay yaraynaysaa shuruudaha wiishka buundada.
Cagaha Dib Looga Noqon Karo
Cagaha oo si hawo leh u shaqeynaya oo ku xiran qufulka muhiimka ah ee salka hoose ee santuuqa si loogu qaado santuuqa iyo qafis lagu xoojiyo mashiinka. Cagaha waxay kaloo taageeraan dhuumaha la dhammeeyay iyo giraanta wadajirka ah ee loo dhigay sida loogu qaado aagga daweynta.
Hal wiish oo jiingado ah oo nooca dhulka ku rakiban ah ayaa la bixiyaa halkii saldhigba si loogu meeleeyo madaxyada foomamka.
Wareegtada korantada ku shaqeeya ee tamarta wax ku oolka ah waxay ku daraan mashiinno duub ah oo bixiya waxqabad aan caadi ahayn iyo mudooyin dheeri ah oo lube ah oo loogu talagalay dayactirka iyo nolosha dheer. Miisaannada la isku hagaajin karo waxay u oggolaanayaan in si xoog ah loogu hagaajiyo xakamaynta gariirka saxda ah.
Hore: Mashiinka alxanka qafis
Xiga: Qashinka birta ah ee birta ah
Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, Qaab dhismeedka, Lag Bolts, Hex handarraabbadeedii, Gawaarida Gawaarida, U Bolts,